यो एक हल्ला हो। एक हप्ता पनि बित्दैन कि मसँग कम्पनीहरु मलाई सोध्दैनन् कि हामी कती शुल्क लिन्छौं नयाँ वेबसाइट। प्रश्न आफैंमा एक बदसूरत रातो झण्डा उठाउँछ कि सामान्यतया यसको मतलब यो हो कि यो समय को बर्बादी को लागी एक ग्राहक को रूप मा मेरो पछि लाग्न को लागी। किन? किनकि उनीहरु एक स्थिर परियोजना को रूप मा एक वेबसाइट मा देखीरहेछन् कि एक शुरू र एक समापन बिन्दु हो। यो हैन ... यो एक माध्यम हो कि लगातार अनुकूलित र tweaked हुनुपर्छ।
शुरू गरौं किन तपाइँ पनी एक वेबसाइट को साथ शुरू गर्न को लागी। एक वेबसाइट तपाइँको एक महत्वपूर्ण भाग हो समग्र डिजिटल उपस्थिति जहाँ तपाइँको प्रतिष्ठा बनेको छ र तपाइँ सम्भावित ग्राहकहरु लाई धेरै आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि व्यवसाय को लागी, तिनीहरुको डिजिटल उपस्थिति मात्र आफ्नो वेबसाइट हैन ... यो समावेश छ:
निर्देशिका साइटहरू - के उनीहरु साइटहरु मा देखिन्छन् जहाँ मानिसहरु आफ्नो उत्पादन वा सेवा को लागी खोजिरहेका छन्? सायद यो Angi, Yelp, वा अन्य गुणस्तर निर्देशिका हो।
इन्जिनहरू खोज्नुहोस् -क्रेताहरु सक्रिय रूप मा जानकारी को लागी उनीहरु लाई उनीहरुको निर्णय प्रक्रिया मा मद्दत को लागी खोजिरहेका छन्। के तपाइँ उपस्थित हुनुहुन्छ जहाँ उनीहरु हेर्दै छन्? के तपाइँसँग एक छ सामग्री पुस्तकालय कि लगातार अप टु डेट छ?
प्रत्येक माध्यम र च्यानल भर मा तपाइँको डिजिटल उपस्थिति समन्वय एक निरपेक्ष आवश्यकता आजकल छ र यो राम्रो संग मात्र निर्माण बाहिर छ नयाँ वेबसाइट.
तपाईंको वेबसाइट कहिले पनि हुँदैन सम्पन्न। किन? किनकि जुन उद्योगमा तपाइँ काम गर्नुहुन्छ परिवर्तन गर्न को लागी जारी छ। एक वेबसाइट भएको एक जहाज भएको जस्तै हो कि तपाइँ खुला पानी नेभिगेट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाइँ लगातार शर्तहरु लाई समायोजन गर्न को लागी आवश्यक छ - चाहे यो प्रतियोगीहरु, खरीददारहरु, खोज इन्जिन एल्गोरिदम, उभरिरहेको टेक्नोलोजी, वा यहाँ सम्म कि तपाइँको नयाँ उत्पादनहरु र सेवाहरु हो। तपाइँ तपाइँको नेभिगेसन लाई समायोजित गर्न को लागी आकर्षित गर्न, सूचित गर्न, र आगन्तुकहरु लाई रूपान्तरण मा सफल हुन को लागी जारी राख्नु पर्छ।
अर्को समानता चाहिन्छ? यो कसैलाई सोध्नु जस्तै हो, "स्वस्थ हुनको लागि कति खर्च हुन्छ?"स्वस्थ हुन को लागी स्वस्थ खाना, व्यायाम, र समय संगै गति को निर्माण को आवश्यकता छ। कहिलेकाहीँ चोटहरु संग असफलताहरु छन्। कहिलेकाहीँ त्यहाँ रोगहरु छन्। तर स्वस्थ हुन एक अन्त बिन्दु छैन, यो निरन्तर मर्मत र समायोजन को रूप मा हामी बुढो बढ्नु आवश्यक छ।
उभरती टेक्नोलोजीहरू - जस्तै नयाँ टेक्नोलोजीहरु अपेक्षित हुँदैछन्, के तपाइँ उनीहरुलाई लागू गर्दै हुनुहुन्छ? आजको वेबसाइट आगन्तुक धेरै फरक अपेक्षाहरु छन्, स्वयं सेवा गर्न चाहानुहुन्छ। एक महान उदाहरण नियुक्ति अनुसूची हो।
जुनसुकै मार्केटि agency एजेन्सी वा पेशेवर तपाइँ भाडामा लिनुपर्छ तपाइँको उद्योग, तपाइँको प्रतिस्पर्धा, तपाइँको भेदभाव, तपाइँको उत्पादन र सेवाहरु, तपाइँको ब्रान्डि,, र तपाइँको सञ्चार रणनीति को बारे मा सजग रहनु पर्छ। उनीहरु केवल एक डिजाइन मा ठट्टा गर्न र त्यसपछि त्यो डिजाइन को कार्यान्वयन बाहिर मूल्य निर्धारण गर्नु हुँदैन। यदि त्यो सबै उनीहरु के गर्दैछन्, तपाइँ एक नयाँ मार्केटि partner पार्टनर संग काम गर्न को लागी भेट्नु पर्छ।
तपाईंको वेबसाईट टेक्नोलोजी, डिजाईन, माइग्रेसन, इन्टिग्रेसनहरू, र - अवश्य तपाईंको सामग्रीको संयोजन हो। दिन तपाईंको नयाँ वेबसाइट लाइभ छ तपाइँको डिजिटल मार्केटि project परियोजना को अन्तिम बिन्दु हैन, यो शाब्दिक एक राम्रो डिजिटल मार्केटि presence उपस्थिति को निर्माण को दिन १ हो। तपाइँ एक साझेदार संग काम गर्नु पर्छ जुन तपाइँलाई समग्र तैनाती योजना को पहिचान गर्न को लागी, प्रत्येक चरण को प्राथमिकता, र त्यो कार्यान्वयन गर्न मा मद्दत गर्न को लागी मद्दत गरीरहेको छ।
चाहे त्यो एक विज्ञापन अभियान हो, एक भिडियो रणनीति को विकास, ग्राहकहरु को यात्रा को नक्शा, या एक ल्यान्डि page पृष्ठ डिजाइन ... तपाइँ एक साझेदार मा लगानी गर्नु पर्छ कि कसरी सबै कुरा मिलेर काम गर्दछ। मेरो सिफारिश को लागी तपाइँको वेबसाइट को बजेट टस गर्न को लागी हुनेछ, र यसको सट्टा, एक लगानी तपाइँ तपाइँको डिजिटल मार्केटि strategy रणनीति को कार्यान्वयन जारी राख्न को लागी प्रत्येक महिना बनाउन चाहानुहुन्छ निर्धारित गर्नुहोस्।
हो, निर्माण एक नयाँ वेबसाइट कि समग्र रणनीति को हिस्सा हुन सक्छ, तर यो एक निरन्तर सुधार प्रक्रिया हो ... एक परियोजना हो कि कहिल्यै पूरा गर्नु पर्छ।